I-GSpace Apk Khuphela ye-Android [i-Cloning App]-Luso Gamer
Ukhuphelo lwe-GSpace ye-Apk ye-Android [i-Cloning App]
Disemba 7, 2021 by John Smith
Ingqikelelo ye-cloning yeza xa iingcali ziqala ukucinga ukwenza imisebenzi emininzi. Nangona i-smartphone ibonelela ngolu luhlu lubanzi lwemisebenzi emininzi. ukanti sithathela ingqalelo ukusebenza kosetyenziso ngalunye ngamaxesha amaninzi sizise i-GSpace Apk.
Ngokwenyani, isixhobo sidume ngokuqhutywa kwe-cloning apps. Nangona ingekho inketho ethe ngqo enjalo ye-cloning efikelelekayo ngaphakathi kwee-smartphones. Ukwenza imisebenzi enjalo, abasebenzisi kufuneka bafakele izixhobo zomntu wesithathu emva koko bonwabele imisebenzi yepro.
Ngelixa sijonga isixhobo sifumene uninzi lwezinto ezahlukeneyo kunye nokusebenza ngaphakathi. Siza kuxoxa ngale misebenzi iphambili ngokufutshane inyathelo ngenyathelo ngezantsi apha. Ke unomdla kwaye ulungele ukonwabela iimpawu zepro simahla emva koko ufake i-GSpace App.
Yintoni i-GSpace Apk
I-GSpace Apk sisixhobo se-android esixhaswe ngumntu wesithathu esakhiwe yi-GSPACE. Isizathu sokuqulunqa esi sicelo kukubonelela ngepaseji ekhuselekileyo. Apho abasebenzisi be-android banokuvelisa ngokulula ii-clones ezingapheliyo simahla ngaphandle kobhaliso.
Ngaphandle kokudibanisa ii-apps ze-android, isixhobo sikwadumile phakathi kwabadlali be-android. Uninzi lwabadlali bomdlalo banolwazi malunga nokuvalwa kweeakhawunti zemidlalo kunye nezixhobo. Ubukhulu becala bafuna amaqonga akhuselekileyo kwi-intanethi.
Nangona kunjalo uninzi lwemithombo efikelelekayo kwi-intanethi yiprimiyamu. Yiyiphi inkxaso kwaye inqande ukuvalwa okanye ii-akhawunti kunye ne-ID. Kodwa apha abaphuhlisi baqulunqa esi sixhobo esimangalisayo se-android esikhululekile ukuyifaka kwaye asifuni ukubhaliswa.
Ngaphezu koko, ukudibanisa i I-Cloning App iya kunceda ekufihleni iinkcazi zesixhobo ezingundoqo kuquka i-IMEI kunye needilesi ze-IP. Kungoko ukufihla amanani aphambili kuya kuvala abancedisi ekulandeni iziqinisekiso ezifanelekileyo. Ke uyazithanda izinto eziphambili emva koko ufake i-GSpace Khuphela.
ubungakanani 5 MB
Igama lepakheji com.gspace.android
Inkqubo yokufaka kunye nokusetyenziswa kwesicelo ilula kakhulu. Okokuqala, abasebenzisi be-android bayacelwa ukuba bakhuphele inguqulelo yamva nje yefayile ye-Apk ukusuka apha. Nje ukuba ukhuphelo lwesicelo lugqityiwe, ngoku tyelela icandelo lokugcina eliphambili.
Emva koko fumana ifayile ye-Apk ekhutshelweyo kwaye uqalise inkqubo yokufakela. Nje ukuba ukufakwa kwesicelo kugqityiwe, ngoku ndwendwela imenyu ephathwayo kwaye uqalise isixhobo esifakiweyo. Ngoku vumela iimvume ezingundoqo ukuba ziqhube iplagin ngokutyibilikayo.
Abasebenzisi banokungqina olu phawu lokudibanisa ngaphakathi kwimenyu engundoqo. Ngoku cofa kumqondiso ophambili wokudibanisa kwaye wongeze ii-icon zosetyenziso ezahlukeneyo zokungenisa iifayile. Nje ukuba inkqubo ye-cloning igqityiwe, ngoku ndwendwela i-icon engundoqo kwaye uqalise i-icon engenisiweyo.
Nangona ezinye iimpawu zepro ezahlukeneyo zifikeleleka ukuba zisetyenziswe. Kwanezinye zezo mpawu ziphambili ziphantsi kwesigaba sokwakha kwaye zinokufikeleleka kwiintsuku ezizayo. Kukho ingxaki enye abasebenzisi abanokufumana kuyo ngelixa besebenzisa isixhobo.
Loo ngxaki ziintengiso zomntu wesithathu. Kodwa khumbula ukuba iintengiso ezixhaswe ngumntu wesithathu ziyasebenziseka kwiselula kwaye ziya kubonakala kwiscreen kunqabile. Ke ukulungele ukonwabela iimpawu zepro kwaye uzimisele ukonwabela iinketho zeprimiyamu emva koko ukhuphele i-GSpace Android.
Iimpawu eziphambili zesiXhobo
Ifayile ye-Apk isimahla ukuba ikhutshelwe.
Ukudibanisa isixhobo kunika iinketho ezahlukeneyo zepro.
Ezo ziquka i-Cloning kunye neMisebenzi emininzi.
Ujongano losetyenziso luyasebenziseka kwiselfowuni.
Uyikhuphela njani i-GSspace Apk
Kutshanje esi sixhobo besinokufikelelwa kwi-Play Store. Kodwa ngenxa yeminye imiba ephambili, esi sicelo asisafikeleleki ukufikelela ukusuka apho. Ke kufuneka benze ntoni abasebenzisi be-android kwimeko enjalo xa bengakwazi ukufikelela kwisixhobo sosetyenziso?
Yiyo loo nto ubhidekile kwaye awazi ukuba ngubani omawuthembe kufuneka undwendwele iwebhusayithi yethu. Kuba apha kwiwebhusayithi yethu sinika kuphela iifayile ze-Apk eziyinyani kunye nezangaphambili. Ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi kunye nobumfihlo, sifaka i-Apk ngaphezulu kwezixhobo ezahlukeneyo ngaphambi kokunikezela ngayo ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela.
Isixhobo sosetyenziso esisinikezelayo apha kubasebenzisi be-android sesoqobo. Nokufikelela kwiimpawu eziphambili zesicelo akufuni rhumo okanye ubhaliso. Ke ngoko isixhobo sibonakala sicocekile kwaye sikhuselekile ukufaka ngaphakathi kwee-smartphones.
Sele sipapashe kwaye sabelane nezinye izixhobo zokubumba ezifanayo kunye nezinxulumene nale app. Ke ngoko ukujonga ezinye ii -apps ezifikelelekayo nceda ucofe kumakhonkco alandelayo. Ezo zinjalo IVPhoneGAGA Apk kwaye I-TP eyiyo.
Ukuba ukhangela isixhobo esenza ukuba abasebenzisi be-android bakonwabele ukwenza iiclone zeapp ezingenamkhawulo simahla. Ke ngokumalunga noku, sicebisa abo basebenzisi be-android bakhuphele kwaye bafake i-GSpace Apk. Oko kusimahla ukukhuphela kunye nokufikelela kwiwebhusayithi yethu ngokucofa okukodwa.
iindidi izixhobo, apps tags I-Cloning App, GSspace Android, GSspace Apk, GSspace App, Ukhuphelo lwe-GSspace Post yokukhangela
IRank Booster Mobile Legends Khuphela i-Apk ye-Android [Isixhobo seML]
Ukhuphelo lwe-Mucho Dlala ye-Android [IPTV's]